We She Me: ယောက်ျားကြိုက်
Anonymous - 7/22/08, 11:29 PM
စစချင်း ကွန်မန့် ၀င်ပွတ်လိုက်မယ် .. ယောက်ျားကြိုက်ကြီးကလည်း မတရားသလိုလိုပါလားး)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျစ်ယုံကြည်တာကတော့ လူတိုင်း ကိုယ်ကြိုက်တာ လုပ်ချင်ကြတဲ့အတွက် ၊ အိမ်ထောင်တခုမှာ အပေးအယူလေး ရှိသင့်တယ်ဆိုရင် သိပ်သာယာမယ် ထင်ပါတယ် ။ အဓိကတော့ ယောက်ျားကြိုက်တာမျိုး မိန်းမကလည်း ကြိုက်ပြီးသားဆို အေးဆေးပဲပေါ့လေး)
ဒါနဲ့ ကိုအန်ဒီ gadgets ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်ဗျး)
ုkom - 7/23/08, 1:01 AM
ကိုယ်သိတဲ.ယောက်ကျားကြိုက် ကတော. သူလုပ်ချင်တာ ကို ခွင်.ပြုထား တာပါဘဲ. . တရားဥပဒေဘောင်ထဲ ကပေါ.။
- - 7/23/08, 1:04 AM
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က နှစ်ဖက်စလုံးကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 7/23/08, 1:29 AM
"မိန်းမတွေက လုပ်ချင်တာထက် (စာရေးချင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေချင်တာထက်) လိုချင်တာ (အိမ်၊ ကား၊ အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်ရတနာ) က ပိုများပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ရလာတာမျိုးကိုလည်း မိန်းမတွေက ဖြစ်စေချင်တာပါ။"
ဲမြန်မာအမျိုးသမီးထုကြီး ကိုယ်စား လုံးဝကန့်ကွက်သည်။
nu-san - 7/23/08, 1:36 AM
အဟိ.. Andy ရေးထားတာတွေက မှန်၏ နောက်စေ့ လို့ပြောရမလိုပဲ.. အားလုံးကွက်တိပါပဲလား.. :D
အမကတော့ ကွန်ပျူတာ game ဆော့တာ crazy ဖြစ်တဲ့ ယောင်္ကျားကို ရ ထားတော့လည်း သူ့ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ ထားပြီး game ဆော့ခိုင်း ထားရတာပေါ့ကွယ်.. အဲဒါဆိုတော့ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာ အမလည်း အေးအေးဆေးဆေး blog လို့ရတာပေါ့.. :P
pandora - 7/23/08, 2:37 AM
ဒီလို လမ်းကြောင်းပေးမထားနဲ့လေ..။ တို့လည်း လုပ်ချင်တာ လုပ်မှာပဲ . ရ၀ူး..။
ဟိဟိ မနုစံ အကြံကောင်းတယ်။
ဇနိ - 7/23/08, 3:09 AM
(((ယောက်ျားတွေက ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေရတာကို ကြိုက်ပြီး အဲဒီလို ပေးလုပ်ထားတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ )))
အဲဒါကတော့ ဟုတ်သနော်...း)
မောင် - 7/23/08, 8:38 AM
ယာက်ျားတွေက ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေရတာကို ကြိုက်ပြီး အဲဒီလို ပေးလုပ်ထားတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 7/23/08, 2:19 PM
ga yu site khan chin tar ka tot man & woman tu tu pae htin tel. man ka tg 30% laut po oo mel. မိန်းမတွေက လုပ်ချင်တာထက် (စာရေးချင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေချင်တာထက်) လိုချင်တာ (အိမ်၊ ကား၊ အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်ရတနာ) က ပိုများပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ရလာတာမျိုးကိုလည်း မိန်းမတွေက ဖြစ်စေချင်တာပါ။<-- dar tot lone wa mhar tel. Ko lote arr nae ya tar ka po cho myane tel.
Anonymous - 7/23/08, 2:58 PM
:) carry on ko aundy. I think it is right. :P
Anonymous - 7/23/08, 3:56 PM
I think men are easy to be friends again however they argue & fight for opinions while women cannot easily forget on comments of others on them.
Phyo Wai Kyaw - 7/23/08, 4:57 PM
ဒီလူ့ အရေးအသားတွေက သုတေသီ တယောက်နဲ့ တူလာပြီဗျး))
ဝေတိုး - 7/23/08, 11:35 PM
အရေးအသားနဲ့အတွေးအခေါ်တွေက De Beauvoir ရဲ့ The Second Sex လိုလို...:))
Andy Myint - 7/24/08, 2:42 PM
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာကတော့ စာတစ်ပိုဒ်က ရေးတာ လိုသွားတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ရှိတာက ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့သူတွေကို လက်ထပ်လိုတဲ့ မိန်းမ အနည်းငယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရေးတာ လိုသွားတော့ နားလည်မှု လွဲစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ Publish လုပ်ပြီးလည်း ဖြစ် Comment မှာလည်း ပါနေတော့ ပြန်ဖျက်လို့ မရ ပြန်ပြင်လို့လည်း မရတော့လို ခြစ်ရုံပဲ ခြစ်ထားတယ်။ အတိုပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ရေးတာ လွဲမှားသွားယ်။
ဟုတ်တယ် ဂျစ်ရေ… ခါးသီးတဲ့ အမှန်တရားများ ဖြစ်သွားလား။ ကျွန်တော် ထင်တာတော့ ယောက်ျားကြိုက်တာကို မိန်းမက လိုက်ကြိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဥပမာ ဘောလုံးပွဲကြည့်သလိုမျိုးပေါ့။ အဓိကကတော့ ယောက်ျားက မဟုတ်တာ မကြိုက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတာလို့ ကျွန်တော်က ယူဆတယ်။
ဒါပေါ့ မခင်ဦးမေ.. ခွင့်ပြုထားတယ် ဆိုပေမယ့် အလျော့အတင်းပေါ့။ ဘေးမဖြစ်တာမျိုးဆို ခွင့်ပြုလို့ ရနိုင်တာပဲ။
ကျေးဇူးပါ စာဖတ်သူ (--)
ကျွန်တော်ရေးတာ လိုသွားတယ် စာဖတ်သူ။
ကို--ကြီး အခုထိ Game ဆော့တုန်းပဲလား မနုစံ။ Online ချနေကြတာ ဟုတ်?
ဟားဟား.. မပန်တို့က ဒက်တယ်
ရှူးတိုးတိုး ကိုဇနိ.. ကျွန်တော် လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ ရအောင် လုပ်ရေးထားတာ။
ထောက်ခံမဲ တစ်မဲတော့ ရပြီ မောင်။
Dear Reader, that may be because men are not as sensitive and emotional as women – I reckon. :) Yeah I admit the above phrase seems rather offensive (though it is my experience from few women).
ဘ၀ပေး သင်ခန်းစာပေါ့ ကိုဖြိုး.. ဟီးဟီး နောက်တာ
ကျွန်တော် မူရင်းတော့ မဖတ်ဖူးဘူး မဝေတိုး။ ဆရာမြ ပြန်ထားတဲ့ မိန်းမတို့ အကြောင်း (လား မသိ) တော့ ဖတ်ဘူးတယ်။ ကြာတော့ ကြာပြီ။ စိတ်ထဲကတော့ လွှမ်းမိုးမှု ခံထားရနိုင်တယ်။ သူရေးတဲ့ ထဲမှာ ရေပွက်ပမာ (A Very Easy Death) ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ “သူမတို့ နှစ်ယောက်” post လေးပါ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါဦးလား။
မဇနိ - 7/24/08, 2:55 PM
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီး အစ်မကိုပဲ အလိုလိုက်နေရတာ သိတယ်နော်။ ဗိုက်ဗိုက်ကြီးနဲ့လေယာဉ်ကွင်း ခေါ်သွားရသေးတာ မှတ်မိတယ်နော်။ တိန်!
အခုတော့ အကြိုက်တွေ သိသွားပီ။
အက္ခရ - 7/24/08, 6:40 PM
အညာသား - 7/26/08, 6:41 AM
အခုမှပဲ ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရသဗျို့...။ :D
Andy Myint - 7/27/08, 9:00 PM
သူ့ကို အလိုလိုက်မှ ကိုယ်ကို အလိုလိုက်မှာ ဆိုပြီး နှစ်ယောက်စလုံးက အလိုလိုက်ပြီး နှစ်ယောက်လုံး ပျက်စီး (Spoiled ဖြစ်နေတာ) နေကြတာလေ မဇနိရေ.. တိန်!
ကိုယ်အကြောင်းကိုယ် သိသွားပြီလာ အညာသား
စိုးထက် - Soe Htet ! - 7/31/08, 11:48 PM
ဟဲ ဟဲ ... နောက် ကျသွားတယ် ... အားလုံး မှန်ပါတယ် ... အဲ ... ကျွန်တော် နဲ့ တော်တော် ကိုက်ညီ ပါတယ် ပြောတာပါ ... ဟိ :)
Andy Myint - 8/4/08, 9:40 PM
မှန်ရမယ်လေ... ဒါယောက်ျား ကြိုက်ပဲကိုး...
Moe Cho Thinn - 2/16/10, 4:05 PM
ဒါကြောင့် တို့က ယောကျာင်္းတွေကို မိန်းမတွေထက် ပိုပြီး selfish ဖြစ်တဲ့လူတွေ လို့ ထင်တယ်။ မုန်းလို့ ပြောတာ မဟုတ်၊ တခါတလေ သူတို့လို စိတ်မျိုး ထားနိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက် ကောင်းတယ် ထင်မိသားး..
ကို Andy ပြောတာ အမှန်တွေချည်းးး ဒီပို့စ်ကို ဘာလို့ မဖတ်ဖူးပါလိမ့်။ ခုမှ ဖတ်မိတာ။ မိန်းမ အကြိုက် ပို့စ်ထက် ပို သဘောကျတယ်။